ကလေးမွေးပြီး (၃) ရက်မြောက်နေ့မှာ သူ့ယောကျာ်းက အတင်းအကြပ် ဆက်ဆံလို့ သေဆုံးသွားတဲ့ (ဖြစ်ရပ်မှန်) - Grand Parents-Day
Home / News / ကလေးမွေးပြီး (၃) ရက်မြောက်နေ့မှာ သူ့ယောကျာ်းက အတင်းအကြပ် ဆက်ဆံလို့ သေဆုံးသွားတဲ့ (ဖြစ်ရပ်မှန်)
ကလေးမွေးပြီး (၃) ရက်မြောက်နေ့မှာ သူ့ယောကျာ်းက အတင်းအကြပ် ဆက်ဆံလို့ သေဆုံးသွားတဲ့ (ဖြစ်ရပ်မှန်)
”ကလေးမွေးပြီး ရင် ၄၅ ရက် တိတိ ယောကျာ်း နဲ့ မနေနဲ့ ”ဒါက ကလေးမွေးပြီးစ အမျိုးသမီးတွေကို မှာနေကျ စကားပေါ့ …
“ယောကျာ်းဖြစ်ရ တာ ကံကောင်းပါတယ်”
‘ကလေးမွေးပြီးရင် ၄၅ ရက်တိတိ ယောကျာ်းနဲ့ မနေနဲ့’ ဒါက ကလေးမွေးပြီးစ အမျိုးသမီးတွေကို မှာနေကျစကားပေါ့။ အဲဒီအချိန်အတွင်းမှာ အမျိုးသမီးကို အနားပေးထားတယ် …။
အင်မတန်မှကို ပင်ပန်းခက်ခဲတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ ကလေးမွေးဖွားမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ အားပြန်မွေးရတဲ့ကာလကိုး။ သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဂရုစို်က်ရတယ်။ အာဟာရပြည့်ဝအောင်နေရတယ် …။
ကလေးကို မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးဆို မိသားစုဝင်တွေနဲ့ အမျိုးသားကလည်း သူ့ကို သည ်းသည်းလှုပ်ဂရုစိုက်တတ်ကြတာပေါ့ …။
သူစားချင်တာ၊ သူဖြစ်ချင်တာ အကုန်လုပ်ပေးတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရော၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပါ အားပေးတယ်။ သူလုပ်ရမယ့် ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်တွေကို ဝိုင်းကူပေးကြတယ် …။
ဒါပေမယ့် တချို့အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ ဒီလိုအားပေးကူညီမှုတွေ မရနေပါဘူး။ သူ့အလုပ်တွေ သူ့ဟာသူ လုုပ်ရတယ်။ အိမ်အလုပ်တွေလည်း ဝင်ကူရတယ်။ ကလေးဝေယျာဝစ္စလည်း သူပဲလုပ်ရပါတယ် …။
အမျိုးသားက ဒါတွေ သူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ ပိုက်ဆံရှာရမယ့် အလုပ်ကိုပဲ လုပ်တယ်။ ပဲခူးတိုင်း၊ ကျောက်တန်းကျေးရွာ အုပ်စုထဲက အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကတော့ အဲဒီထက်တောင်ပိုပါသေးတယ် …။တစ်ရက်မှာ Win-Win Organization ဆေးကုသနေတဲ့ဆီကို သူ ရောက်လာပါတယ်။ ကလေးမွေးပြီးတာ ၁၀ ရက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ သူ့မိန်းမကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာ အနာဖြစ်လို့တဲ့ …။
အဖွဲ့ရဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ ဆုဇင်ဝင်းသန်းက စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ ကလေးမွေးပြီး ပြန်ချုပ်ထားတဲ့နေရာက ကွဲနေတာ။ ပိုးတွေဝင်ပြီး အနံ့အသက်လည်း တော်တော်မကောင်းတော့ဘူး …။
ဒါနဲ့ ပိုးသတ်ဆေးပေးရုံနဲ့ မရဘဲ ဆေးရုံကိုသွားမှ ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်တယ်။ အိမ်မှာမွေးပြီး သေသေချာချာ မချုပ်ခဲ့လို့ ပိုးဝင်တာလား အထင်နဲ့ မေးလိုက်တော့ အင်မတန် စိတ်ပျက်အံ့သြရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ကြားသိလိုက်ရပါတယ် …။
ကလေးမွေးပြီး ၃ ရက်မြောက်နေ့မှာ သူ့ယောကျာ်းက အတင်းအကြပ် ဆက်ဆံသွားတာတဲ့လေ။ သြော်..လို့ပဲ အားလုံးက စုပ်သတ်နိုင်ခဲ့တော့တယ်။ လူတွေက ပြောကြတယ်၊ လင်မယားကြားပါဆိုမှ မုဒိမ်းမှုဆိုတာ ဘယ်ရှိမှာလဲတဲ့ …။
ကာမပိုင်ယောကျာ်းလို့လည်းသုံးနှုန်းကြသေးတော့ အိမ်ထောင်ပြုပြီးသွားရင် ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ကာမကို သူ့ယောကျာ်းက ပိုင်သွားပြီလို့ ထင်တတ်ကြတာကိုး။ တကယ်တော့ မုဒိမ်းမှုဆိုတာ လင်မယားဖြစ်ခြင်း၊ ချစ်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘဲ ခွင့်ပြုမပြု ဆိုတဲ့အပေါ်ပဲ အခြေခံစဉ်းစားရတဲ့ အရာမျိုးပါ …။
ကလေးမွေးပြီးစ အင်အားချိနဲ့နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ဒီလိုပြုမူတာဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ရတယ် ဆိုတာလည်း စဉ်းစားလို့တောင်မရပါဘူး …။
အဲဒါနဲ့ ဆေးရုံကိုလွှဲ၊ သွားဖို့ ပိုက်ဆံမရှိဘူး ဆိုတဲ့အတွက် ငွေကြေးပါထောက်ပံ့ပေးပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ရတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခါ အဲ့ဒီရွာလေးကို ရောက်တော့ ဒီအမျိုးသမီးအကြောင်း သတိတရမေးတယ်။ ဆေးရုံသွားပြပြီး နေကောင်းနေပြီလားဆိုတော့ ဆုံးသွားရှာပြီတဲ့ …။
ဘာလို့လဲ၊ ဆေးရုံအရောက် နောက်ကျလို့လားဆိုတော့ သွားကိုမသွားလိုက်ရတာ။ Win-Win နဲ့ တွေ့ပြီး သူအိမ်ပြန်သွားတယ်။ ဆေးရုံသွားဖို့ လိုကြောင်း အိမ်ကိုပြောပြပြီးတဲ့အချိန်မှာ ယောက္ခမဖြစ်သူက Win-Win က ပေးလိုက်တဲ့ ထောက်ပံ့ငွေကို သိမ်းလိုက်တယ် …။
ပြီးတော့ နင် ဆေးရုံသွားစရာ မလိုဘူးတဲ့၊ နင် ဆေးရုံတက်ရင် အိမ်မှာ ကလေးကို ဘယ်သူထိန်းမလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို ပေးတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဒီလောက်ဆိုးဆိုးရွားရွား ပိုးဝင်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ဆေးရုံတောင် မရောက်လိုက်ရဘဲ အိမ်မှာတင် အသက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ် …။
ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ ဘယ်သူ သိမှာလဲ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးနေ၊ ဘဝတွေ ထိခိုက်နေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရော ဘယ်နှယောက်တောင် ရှိပြီလဲ။ ဒီပြဿနာဟာ အရေးမကြီးဘူးလို့ရော ထင်နေကြတုန်းပါပဲလား…?
ဒီလို အနိုင်ကျင့်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးလုပ်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး နေနေလို့ရောရတယ်တဲ့လား…?
အမျိုးသမီးတွေဟာ နှိမ့်ချ ဆက်ဆံမှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ အနိုင်ကျင့်မှုတွေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုတွေကြားထဲမှာ ရှင်သန်နေရပါတယ်။ ခုလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ မြင်နေ တွေ့နေရပေမယ့် လူတချို့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကျားမခွဲခြားဆက်ဆံမှု မရှိဘူး၊ လင်နဲ့မယားကြားမှာ မုဒိမ်းမှုဆိုတာ မရှိဘူးရယ်လို့ ခုချိန်ထိ လက်ခံနေကြဆဲပဲ …။
ကာကွယ်ဖို့မပြောနဲ့၊ ဒီလိုကိစ္စရပ်တွေ ရှိနေပါလားဆိုတာကို သိအောင်ပဲ အရင်လုပ်ကြရဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
တကယ်တော့ ဒီလို လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာ ယောကျာ်းဖြစ်ခွင့်ရတာ အင်မတန် ကံကောင်းလှပါတယ် …။ ။